ဥရောပနဲ့ တောင်အမေရိကတိုက် ပြင်ပမှာ ပထမဆုံး ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၇၀ ကမ္ဘာ့ဖလား
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းများ အပိုင်း (၉)
18 Jun 2018 . 2:41 AM
တောင်အမေရိကတိုက်နဲ့ ဥရောပတိုက်ပြင်ပမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခွင့်ကို မြောက်အမေရိကတိုက်မှာရှိတဲ့ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံက ရရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ဖလား သမိုင်းတစ်လျှောက် ပြိုင်ပွဲစည်းမျဉ်းမြောက်များစွာကို ပြောင်းလဲကျင်းပခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ လက်ရှိချန်ပီယံ အင်္ဂလန်အသင်းကတော့ ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမရှိလို့ ပြိုင်ပွဲနဲ့ လွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။ လူစားလဲစနစ်ကို စတင်ကျင်းသုံးခဲ့ပြီး တစ်သင်းကို ကစားသမား (၂)ယောက် လူစားလဲခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အ၀ါကတ်၊ အနီကတ်စနစ်ကို စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပေမယ့် ကတ်ပြသခံရတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်မှ မရှိတဲ့ ပြိုင်ပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဖြူ၊ အမည်းရုပ်သံ ထုတ်လွှင့်မှုကနေ ကာလာစနစ်နဲ့ ရုပ်သံထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘရာဇီးလ်တိုက်စစ်မှူး ပီလီနဲ့ အနောက်ဂျာမနီတိုက်စစ်မှူး အူဆီလာတို့ ပြိုင်ပွဲ (၄)ကြိမ်ဆက် ဂိုးသွင်းယူနိုင်တဲ့ ကစားသမားတွေအဖြစ် မှတ်တမ်းကောင်း ရရှိခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲမှာ ဘရာဇီးလ်အသင်းက အီတလီအသင်းကို (၄-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူကာ တတိယမြောက် ချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပြီး ဂျူးရီးမက်ဆုဖလားကို အပိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ အသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သလို ဂန္ထ၀င် တိုက်စစ်မှူး ပီလီမှာလည်း ချန်ပီယံဆုကို (၃)ကြိမ် ရရှိတဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ပွဲ ပျှမ်းမျှ ပရိသတ် (၅၀၀၀၀)ကျော် လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ၁၉၅၀ ဘရာဇီးလ် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ စံချိန်ကို ကျော်ဖြတ်ကာ ပရိသတ်အများဆုံး လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ ပြိုင်ပွဲအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ နှစ်အလိုက် အပိုင်းဖြင့် နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း (၁၀)ကို နောက်ရက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် . . .
၁၉၇၀ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ မှတ်တမ်းအကျဉ်း
Host Country – Mexico
Dates – 31 May – 21 June 1970 (22 days)
Teams – 16 (from5confederations)
Venue(s) –5(in5host cities)
Champions – Brazil (3rd title)
Runners-Up – Italy
Third Place – West Germany
Fourth Place – Uruguay
Goals Scored – 95 (2.97 per match)
Attendance – 1,604,065 (50,127 per match)
Top Scorer(s) – West Germany Gerd Müller (10 goals)
Best Young Player – Teófilo Cubillas (Peru)
Fair Play Award – Peru
Photo:Getty Images, forza27
ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးမြား အပိုငျး (၉)
တောငျအမရေိကတိုကျနဲ့ ဥရောပတိုကျပွငျပမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ ကငျြးပပွုလုပျတဲ့ ပွိုငျပှဲအဖွဈ မှတျတမျးတငျခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲဖွဈပါတယျ။ အိမျရှငျအဖွဈ လကျခံကငျြးပခှငျ့ကို မွောကျအမရေိကတိုကျမှာရှိတဲ့ မက်ကဆီကိုနိုငျငံက ရရှိခဲ့ပွီး ကမ်ဘာ့ဖလား သမိုငျးတဈလြှောကျ ပွိုငျပှဲစညျးမဉျြးမွောကျမြားစှာကို ပွောငျးလဲကငျြးပခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲလညျး ဖွဈခဲ့တယျ။ လကျရှိခနျြပီယံ အင်ျဂလနျအသငျးကတော့ ခွစေဈပှဲအောငျမွငျခဲ့ခွငျးမရှိလို့ ပွိုငျပှဲနဲ့ လှဲခြျောခဲ့ရပါတယျ။ လူစားလဲစနဈကို စတငျကငျြးသုံးခဲ့ပွီး တဈသငျးကို ကစားသမား (၂)ယောကျ လူစားလဲခှငျ့ရရှိခဲ့ပါတယျ။ အဝါကတျ၊ အနီကတျစနဈကို စတငျကငျြ့သုံးခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲဖွဈပမေယျ့ ကတျပွသခံရတဲ့ ကစားသမားတဈယောကျမှ မရှိတဲ့ ပွိုငျပှဲလညျး ဖွဈပါတယျ။
အဖွူ၊ အမညျးရုပျသံ ထုတျလှငျ့မှုကနေ ကာလာစနဈနဲ့ ရုပျသံထုတျလှငျ့ ပွသခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဘရာဇီးလျတိုကျစဈမှူး ပီလီနဲ့ အနောကျဂြာမနီတိုကျစဈမှူး အူဆီလာတို့ ပွိုငျပှဲ (၄)ကွိမျဆကျ ဂိုးသှငျးယူနိုငျတဲ့ ကစားသမားတှအေဖွဈ မှတျတမျးကောငျး ရရှိခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲလညျး ဖွဈပါတယျ။ နောကျဆုံးဗိုလျလုပှဲမှာ ဘရာဇီးလျအသငျးက အီတလီအသငျးကို (၄-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျယူကာ တတိယမွောကျ ခနျြပီယံဆုကို ဆှတျခူးနိုငျခဲ့ပွီး ဂြူးရီးမကျဆုဖလားကို အပိုငျရရှိခဲ့တဲ့ အသငျးအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့သလို ဂန်ထဝငျ တိုကျစဈမှူး ပီလီမှာလညျး ခနျြပီယံဆုကို (၃)ကွိမျ ရရှိတဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။ တဈပှဲ ပြှမျးမြှ ပရိသတျ (၅၀၀၀၀)ကြျော လာရောကျကွညျ့ရှုခဲ့ပွီး ၁၉၅၀ ဘရာဇီးလျ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲရဲ့ စံခြိနျကို ကြျောဖွတျကာ ပရိသတျအမြားဆုံး လာရောကျကွညျ့ရှုတဲ့ ပွိုငျပှဲအဖွဈ မှတျတမျးတငျခဲ့ပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးတှကေို ပွိုငျပှဲကငျြးပခဲ့တဲ့ နှဈအလိုကျ အပိုငျးဖွငျ့ နစေ့ဉျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အပိုငျး (၁၀)ကို နောကျရကျမှာ ဆကျလကျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ . . .
၁၉၇၀ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ မှတျတမျးအကဉျြး
by Naing Linn . 57 mins ago